Induction Brazing Dhuumaha HAVC oo leh Kuleyliyaha Sare ee Brazing kululeeyaha
Bogga ugu weyn / Codsiyada / Dhaqdhaqaaqa wax-qabadka / Induction Brazing Dhuumaha HAVC
Categories: Dhaqdhaqaaqa wax-qabadka, Mashiinka brazing induction Tags: Brazing, xiisaha HVAC, tuujinta tuubooyinka HVAC, naxaas naxaas leh, naxaas HVAC brazing, tuubooyin naxaas ah oo xiraya, HVAC, HVAC kululeeyaha brazing, Warshadaha HVAC, Induction Brazing Tuuboyinka HVAC, indha-indheynta hvac, Induction HVAC kululeeyaha brazing, Induction HVAC kululeeyaha
Induction Brazing Tuuboyinka HVAC
Dhuumaha qaboojiyaha marwalba waa la xiraa iyadoo brazing ay ka dhigeyso isku-xir adag oo aan dheecaan lahayn oo adkeysanaya heerkulka sare iyo hooseeya iyo cadaadiska. Markaad iibinayso tuubada qaboojiyaha waxaa fiican inaad isticmaasho alxanka oo leh halabuur lacag ah dhexdeeda maaddaama lacagta ay ku xiran tahay naxaasta oo ay ka dhigayso dheecaan aad u fiican oo bilaash ah oo isku dhafan (soo jiidasho madax-bannaan).
Soo-saarista HLQ waa khabiiro ku takhasusay sameynta xalalka kuleylka kuleylka ee loogu talagalay xejinta qaybaha kombaresarada, walxaha kuleylka iyo qeybiyeyaasha kuleylka.
Qaboojiyeyaashu waxay leeyihiin dhawr qaybood oo biriijka lagu xidho. Qalabka ugu caansan waa naxaas iyo aluminium:
Qaybaha aluminium, tusaale ahaan uumiyaha iyo iskuxiraha isku xidhka (tubbo-to-tube, tubbo-to-block, tubbo-ilaa-taangi)
Tuubbo-to-rakibiye ka ah qaybta is-urursiga
Qalabka tuubbo-tuubbo ee qaybta uumiga
Tube-to-valves ee nidaamyada qaybinta
Dhaqdhaqaaqa wax-qabadka waxay la mid tahay iibinta illaa heerkulku ka sarreeyo 800 darajoF.
Wixii naxaas ah, isku-xirnaanta xargaha ee badanaa la isticmaalo waxaa badanaa loo yaqaan 'sil-phos' sida bidixda looga arko.
Waxaa jira dhowr nooc oo xaruntaan ah.
15% Fosfooraska / Copper / Silver Alloy waa hal nooc oo adeegsada 15% qalin waana halbeegga tiknoolajiyadaha adeega ee dayactirka qalabka qaboojiyaha. . Uma shaqeynayo sida ugu fiican 5%.
Waxa kale oo jira Alloy ah Fosfoor / Copper Alloy oo aan lacag lahayn oo aan u arko in aan waxtar badan u lahayn dayactirka.
Naxaas Birashada Warshadaha HVAC
Tuubooyin badan oo naxaas ah ayaa qalinka ku duugay lahaanshaha shirkadda 'MSI Automation' tikniyoolajiyadda indha indheyntaKuleylka kuleylka leh tiknoolajiyada kuleylka kuleylka kuleylka kuleylka ah ayaa qalinjebin kara tiro badan oo tuubbo naxaas ah oo ku dhammaanaya hal tallaal. Nidaamkani wuxuu tirtirayaa shuclada gacmaha oo daal badan, wuxuu hagaajiyaa joogtaynta wuxuuna yareeyaa fursadda in xiriirku soo daato.
Wadajirka isku xirnaanta tuubada naxaasta iyo jirka naxaasta ah ayaa dhameystiran. Waqtiga kuleylka adoo adeegsanaya qaaska ah ee MSI kululaynta kuleylka induction waa 1/4 ee naqshadaha gariiradda tubbada wareega wareega caadiga ah.